Izibonelelo kunye nezicelo zobhaliso lwezolawulo apho iipropati ze-rustic, zasezidolophini kunye nezizodwa zichazwe.
Indima ye-geotechnologies ekuhambiseni i-3D Cadastre
NgoLwesine, nge-29 kaNovemba, njengeGeofumadas kunye nababekho abangama-297 sithathe inxaxheba kwi-webinar ekhuthazwe yi-UNIGIS phantsi komxholo othi: "Indima ye-geotechnologies ekwenziweni kwe-3D Cadastre" ngu-Diego Erba, ochaze ubudlelwane obubalulekileyo phakathi kwe-geotechnologies kunye ne-3D cadastre Eli nqaku laligqunyiwe ...
Umbuzo obanzi kakhulu onokubangela iimpendulo ezininzi, uninzi lwazo luneemvakalelo; izinto ezininzi eziguquguqukayo nokuba ngumhlaba ngaphandle okanye ngaphandle kwesakhiwo, izixhobo okanye indawo yesiqhelo. Ukuba bekukho iphepha apho besinokulazi ixabiso lomhlaba kwindawo ethile yesixeko sethu, ngokuqinisekileyo ibiya kuba ...
Kwinqaku elinika umdla likaCadasta, uNoel usixelela ukuba ngaphezulu kweenkokheli zehlabathi ezili-1,000 XNUMX kumalungelo omhlaba zadibana eWashington DC phakathi kunyaka ophelileyo kwiNkomfa yeBhanki yeHlabathi yeNkqantosi kunye neNdlala, ulindelo olukhoyo malunga nemigaqo-nkqubo malunga nokuqokelelwa kwedatha ...
Eli linqaku elinomdla nguFrank Pichel, apho ahlalutya ixabiso elongeziweyo lokhuseleko olusemthethweni olusetyenziselwa ukuthengiswa kwezindlu. Umbuzo wokuqala unomdla kwaye uyinyani; Indikhumbuza ngotyelelo lwam lwakutsha nje kwindawo yokuhlala yaseGranada eNicaragua, apho indlu entle yobukoloniyali inegrafiti "kwipropathi e ...
I-Uruguay, ngokweCandelo loLawulo leSizwe leCadastre kunye neCandelo eliPheleleyo leeRekhodi, iya kubamba "iNkomfa yoNyaka ye-III yeIntanethi yeAmerican Network yeCadasters kunye neRegistry yePropathi" eza kubanjelwa kwisixeko saseMontevideo, phakathi ngo-Novemba 14 no-17, 2017 no ...